PSG Oo Xidig Muhiim Ah Ka Qaadaneyso Kooxda Barcelona.
HomeWararka Ciyaaraha MaantaPSG oo Xidig muhiim ah ka qaadaneyso kooxda barcelona.
June 10, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Kooxda reer France ee PSG ayaa ka careysiin karta Barcelona xitaa xagaagan iyagoo bartilmaameedsanaya weeraryahanka reer Faransiis ee Ousmane Dembele Kooxda Mauricio Pochettino ayaa afduubatay qadka dhexe ee reer Holland Georginio Wijnaldum kaas oo aad ugu dhawaa kooxda barcelona Sida laga soo xigtay Marca.
Xiisadaha u dhexeeya PSG iyo Barcelona ayaa ah mid kacsan waqti xaadirkaan iyadoo kooxda reer france ay xiiseyneyso inay la soo saxiixato Ousmane Dembele xagaagan 24-jirkan ayaa hal sano ka harsan tahay heshiiska uu kula jiro Taasoo ku qasbi karta kooxda reer Spain inay iska iibiyaan halkii uu si bilaash ah uga tagi lahaa sannadka dambe.
Barcelona waxay dooneysaa Dembele inuu sii joogo waxayna qorsheynayaan inay wadahadalo qandaraas kordhin ah la furaan isbuuca soo socda Ousmane Dembele ayaa Barcelona kaga soo biiray kooxda Borussia Dortmund heshiis ku kacayey 105 milyan euro xagaagii 2017.
Barcelona ayaa rajeyneysay in xidiga garabka ka ciyaara uu noqon doono bedelka ugu fiican ee Neymar kaasoo macquul ah inuu ka tago isla markaana da’diisa ay sii kordheyso Horumarkii Dembele ee Barcelona dhowrkii xilli ciyaareed ee ugu horreeyay waxaa si ba’an u hareeyay dhaawacyo.
Ciyaaryahanka reer France ayaa saftay kaliya 51 kulan La Liga seddexdii xilli ciyaareed ee ugu horeysay kooxda Ku guuleystaha Koobka Adduunka ayaa si weyn loola xiriiriyay u dhaqaaqistii Manchester United xagaagii hore Red Devils iyo Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay heshiis ka gaareen arimaha ciyaaryahanka laakiin Dembele ayaa diiday talaabadaas daqiiqadii ugu dambeysay ee suuqa.
Dembele wuxuu go’aansaday inuu sii joogo Barcelona si uu ugu dagaallamo booskiisa ee macalinka cusub Ronald Koeman Ninka reer France ayaa lagu abaalmariyay go’aankiisa madaama uu xubin muhiim ah ka noqday kooxda Koeman ee ku soo bilawday shaxda xilli ciyaareedkan Dembele ayaa dhaliyay 11 gool 44 kulan oo uu ciyaaray tartamada oo dhan kooxda reer Spain.
Barcelona ayaa diyaar u ah inay heshiis qandaraas kordhin ah la gasho Dembele Xiddiga garabka ka ciyaara ayaa si kastaba ha ahaatee shaaca ka qaaday inuusan ku degdegin inuu kala xaajoodo heshiis cusub madaama uu haatan diirada saarayo Euro 2020 halkaas oo ay u badan tahay inuu door muhiim ah ka ciyaaro France.